विमानको बाथरूमभित्र एक जोडीले यस्तो गरिरहेको भिडियो लिक – Naya Pusta
विमानको बाथरूमभित्र एक जोडीले यस्तो गरिरहेको भिडियो लिक
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र २१, शनिबार २०:२९ [post-views]
काठमाडौं । यस पृथ्वीमा मान्छेहरु अरु भन्दा केही फरक गर्ने इच्छा राख्छन् । कसै कसैको इच्छा देख्दा अधिकांश मानिसहरु नै चकित पर्दछन् । यस्तै, एक घटना अमेरिकामा पनि घटेको छ। यहाँ फ्लाइटमा केही महिला बाथरूम जान पर्खेर बसेका छन्।
त्यति बेलै एक जोडी बाथरूमबाट सँगै बाहिर आउँछन्। अमेरिकाका चर्चित भलिवल खेडाली स्टेफर्ड स्लिकले यो घटनाको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जुन भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ।
भिडियोमा देखिएअनुसार महिला र पुरुष दुवै जनाले एकै रङ्गका कपडा लगाएका छन्। उनीहरुले रातो पहिरनमा देखिएका छन्। यो त सामान्य कुरा हो किन चर्चामा आए भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। भएको के भने यी दुई जना एकै बाथरुमबाट निक्लेका हुन्।
स्टेफर्डले घटना कहिलेको हो र कुन फ्लाइटको हो भन्नेबारे केही पनि खुलाएका छैनन्। इन्स्टाग्राममा उनले भिडियो सार्वजनिक गर्दै पहिलोपटक फ्लाइटमा जोडी नै एकैपटक बाथरूमबाट बाहिर आएको देखेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। बाथरूमबाट त्यो जोडी बाहिर निस्कदा भने कसैले केही भनेनन्।
यो सायद विश्वमा विरलै मात्र देखिने दृश्य हो। किनकी हरेक विमानमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै वाथरुम हुन्छ। एउटै वाथरुममा त्यो पनि स्वस्थ र नौजवान जोडी किन पस्यो होला विश्भरीका मानिसले अनेकौँ अड्कालवाजी गरेर कमेण्ट र सेयर गरिरहेका छन् ।
इलाममा बाँस बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा २ जनाको ज्यान गयो
पोर्चुगलमा कवि नवराज पराजुली गुन्जिदै !
नयाँ कार किने, दुर्घटनाले २० मिनेटमै भयो यस्तो हालत
यस्ता छन् विवाहअघि पुरुषले बोल्ने ६ झुट
जान्नुहोस्, भर्जिनिटी गुमाउने उपयुक्त उमेर कुन हो ?
प्रेममा निकै इमान्दार हुन्छन् यी नामका युवती